१० वर्षसम्म आफ्नै श्रीमतीबाट बलात्कृत पुरुषको दर्दनाक कथा, बिरामी हुँदा पनि...
कैयौँ समाजमा पुरुषविरुद्ध घरेलु हिंसाको खासै चर्चा गरिँदैन र पीडितले एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। युक्रेनका एक पुरुषले नाम नखुलाउने सर्तमा आफ्नो कथा बीबीसीलाई सुनाएका छन्। यस्तो छ उनको कथा।
पहिलो सम्पर्क 'पाँच घण्टा लामो'
हाम्रो यौन सम्पर्क औसत एकदेखि दुई घन्टासम्म चल्थ्यो। आनन्ददायी हुनुपर्ने तर मेरो निम्ति त्यो कहिल्यै सुखद रहेन। मलाई पहिले कहिल्यै त्यसको अनुभव थिएन। मलाई यस्तै नै होला भनेर मैले सहमति दिने गर्थेँ। तर पछि मैले नाइँ भनेँ। त्यसले उनलाई रोकेन। त्यसपछि बलात्कारमा बदलियो।
मलाई कामको निम्ति लामो विदेश यात्रामा जानु थियो। इरालाई गुमाउने डर लाग्यो। मैले बिहेको प्रस्ताव गरेँ। उनले अस्वीकार गरिन्। तर मसँग जान तयार भइन्। त्यहीँबाट यो सबै सुरु भयो। म कामले थकित हुन्थेँ र आराम चाहन्थेँ।
तर उनलाई यौनको प्यास हुन्थ्यो। ए -दुई पटक म सहमत भएँ। उनी भन्थिन्, "मलाई चाहिन्छ, मैले लामो समयदेखि तिमिलाई पर्खिरहेकी छु।" मैले थाकेको कुरा भन्थेँ। त्यसपछि उनले मलाई आक्रमण गर्थिन्। म केही गर्न सक्दिनथेँ। छाला कोतर्ने, नङ गाडिदिने। बाहिर नदेखिने गरी छाती, हात र पछाडिको भागमा हान्थिन्। म प्रतिवाद गर्दिनथेँ।
इरासँग फेरि कहिल्यै सम्पर्कमा नआउने उद्देश्यले म घर फर्किएँ। स्वतन्त्र हुने प्रयासमा मेरो कैयौँ वर्ष बित्यो। मैले फोन बन्द गरेँ। सबैतिर उनलाई ब्लक गरेँ। तर उनी आउँथिन् र बन्द ढोकाको अर्को छेउमा बस्थिन्। बोलाउँथिन् र सबैकुरा ठिकठाक हुने वचन दिन्थिन्।
एक्लोपनले सताउने डर लाग्न थाल्यो। उनीसँग गएँ। सुरुमा उनलाई छाड्ने प्रयास गरेँ त्यसपछि अलि कम र अन्तत: त्यो छाडेँ।उनले जोड गरिन्, हामीले गर्‍यौँ। तर म त्यसो होओस् भन्ने चाहन्नथेँ। मेरा साथी र परिवार सबैसँग उनी ईख गर्थिन्।
तर मलाई मुख्य शौचालय प्रयोग गर्न बन्देज जस्तै थियो। मैले हरेक दिन बिहानको ९-१० बजे उनी नउठ्दासम्म पर्खिनुपर्थ्यो। उनले हामी फरकफरक कोठामा सुत्ने तर मेरो कोठा बन्द हुन नहुने निर्णय सुनाएकी थिइन्। म कहिल्यै एक्लै रहन पाउन्नथेँ।
मैले 'केही गलत' गर्दा पिटाइ खानुपर्थ्यो। म निर्बल थिएँ, उनको आक्रोशबाट जोगिन जे भन्यो त्यही गर्थेँ। मलाई सम्झना छ, तल गएर गाडीभित्र बसेर रोएको। उनी आएर हेरिन्। घर घर्किएँ, उनले आफूलाई दु:ख लागेको बताइन्। तर उनले आफ्नो गतिविधि रोक्न सकिनन्। त्यो सबै टार्न मैले बिदाका दिन पनि हरेक दिन १४ घण्टा काम गर्थेँ।
त्यस्तो परिस्थितिमा पर्दा तपाईँलाई कुन अवस्थामा छु भन्ने थाहा हुँदैन। उपाय थाहा हुँदैन र कसैको कुरा सुनिँदैन। पूरै असहाय, मुक्ति पाउने मौका छ भन्ने नै भेउ पाइँदैन। म त्यस्तो परिवारबाट थिएँ कि सोच्थेँ- सम्बन्धका निम्ति सबै त्याग गर्न सक्नुपर्छ।
आफ्ना चाहना सबै त्यागेँ तर सबैकुरा झन् बिग्रियो। सुरुमा मलाई त्यस्तो मन पर्दैनथ्यो। तर पछिल्ला ३-४ वर्षका क्रममा मलाई यौन सम्बन्धले आत्तिने अवस्थामा पुर्‍यायो।
जब इराले समात्थिन् र जबर्जस्ती गर्थिन् मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसमा अभ्यस्त हुन थालेपछि उनलाई धकेलेर भाग्ने र लुक्ने गर्न थालेँ। इरालाई मेरा कारणले हामीबीच यौन सम्बन्धमा समस्या आइरहेको ठान्न थालिन्।
त्यसैले उनी मलाई यौन विशेषज्ञ कहाँ लग्थिन्। जब मैले केही कुरा मलाई मन नपर्ने र म (यौन सम्पर्क) चाहन्न भन्थेँ, त्यसलाई समस्याको रूपमा देखाइन्थ्यो। म दुर्व्यवहार र बलात्कारबारे चुपचाप रहन्थे। सम्बन्धविच्छेदभन्दा केहीअघि मात्र मैले मुख खोलेँ।
'साथ कसरी फेला पारेँ?'
लाग्यो, मेरो जीवन बर्बाद हुँदैछ र मरेँ भने पनि हेर्ने कोही हुन्न। म कसैलाई भन्न चाहन्थेँ तर कसलाई र कसरी भन्ने थाहा थिएन। अभिभावकको घरमा जाँदा त्यहाँ कोही थिएन। फेरि म एक्लो भएँ। इन्टरनेटमा खोजी गर्दै जाँदा सबै कुरा अज्ञात रहने कुराकानी गर्ने माध्यम फेला पारेँ।
जे भइरहेको थियो त्यो व्यक्त गरेको पहिलो पटक थियो। त्यसबेलासम्म पनि मलाई त्यो दुर्व्यवहार हो भन्ने लागेको थिएन। त्यसपछि भने मैल अब हुन्न कहिल्यै हुन्न भन्न थालेँ। चुपचाप बस्नुको साटो 'हुन्न' भन्नु सानो कुरा भए पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। मलाई आत्मबलको खाँचो पर्थ्यो, बिरामी परेका दिनहरू सम्झिन्थेँ।
अन्तत: मैले एक उपचारक भेट्टाएँ। उनले मलाई सहयोग गरे। उपचारका क्रममा इरा र मबीच कुराकानी हुँदा मेरो कुरामा हस्तक्षेप गर्न उनले पाउन्नथिन्। मैले दुर्व्यवहारबारे बोलेको त्यही नै पहिलो पटक हो। उनी रिसाइन् र त्यो सत्य नभएको बताइन्।
मैले?" उनले भनिन्, "त्यसो भए के त?" के उत्तर दिने मलाई थाहा भएन र अझै पनि थाहा छैन। तर उनले जे गरेकी थिइन् त्यो स्वीकार गरिन्। म आमाबुवाको घरमा फर्किएँ। जागिर छाडेँ र केही हप्ता घरमै बसेँ। एक दिन उनी फेरि घरमा आइन् र ढोका ढकढक गरिन्। लात्तीले हानिन्, कराइन्। आमाले डराउनुभयो।
मनमनै हाँस्दै भनेँ, "आमा, तपाईँले अझै पनि कल्पनासम्म गर्न सक्नुहुन्न…।"
मैले उनीविरुद्ध न कुनै प्रमाण जुटाएँ न कसैलाई भनेँ। मैले सम्भवत: परिवारलाई भन्नुपर्थ्यो। तर बाल्यकालदेखि नै मलाई थाहा थियो - उहाँहरूले त्यो कुरा गोप्य राख्न सक्नुहुन्न। म सहयोगी समूहको खोजीमा थिएँ।
तर युक्रेनमा महिलाहरूको निम्ति मात्र त्यस्तो व्यवस्था छ। अन्तत: स्यान फ्र्यान्सिस्कोस्थित पुरुषहरूलाई सहयोग गर्ने अनलाइन समूह फेला पारेँ। युक्रेनका एक थेरपिस्टले मेरो कुरा नपत्याएपछि मैले अन्य छ जनासँग परामर्श गरेँ। अन्त्यमा सहयोग पाएँ। कसैलाई मेरो हात समात्न दिन मलाई आठ महिना लाग्यो।
वकिलहरूले उनलाई नियन्त्रणमा राख्ने आदेशको सम्भावना पनि औँल्याएका थिए। तर अहिले मलाई त्यो आवश्यक छैन। लामो समयदेखि मैले चाहेको कुरा उनले जे गरिन् त्यो स्वीकार गरून् र माफी मागून् भन्ने हो।
म अझै पनि काममा जान्न। मलाई हरेक बिहान बिच्छ्यौनाबाट उठ्न गाह्रो हुन्छ। मलाई थाहा छ, कहिल्यै म दाम्पत्य सम्बन्धमा रहन सक्दिनँ र बालबच्चा हुनेछैनन्। सबै आशा त्यागिदिएँ। तर लामो समयसम्म मौन बस्नु अभिशाप थियो।
त्यसले सबै कुरा बिगार्‍यो। यस्तै अवस्थामा अरू पुरुष हुनसक्छन् र तिनले मेरो कथा पढ्नेछन्। तिनले यो कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ: यसको अन्त्य हुँदैन, कुनै कुराको ठेगान हुँदैन, यो वास्तविक गडबडी हो जुन हराउनेछैन र यसले तपाईँको ज्यान लिनेछ।
यदि तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने कम्तीमा तपाईँसँग आफूलाई जोगाउने मौका रहन्छ।